နှလုံးသားဟာ တစ်ဖန်ပြန်နွေးထွေးပြီး ပန်းတွေ ဖူးပွင့်လာမှာပါ ဆိုတဲ့ နန်းစုရတီစိုး – Let Pan Daily
နန်းစုရတီစိုး ကတော့ အသက်နဲ့ မလိုက်အောင် လှရက်လွန်းတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက် လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားတတ်သလို နုပျိုနေတဲ့အလှတရားတွေ ကြောင့်လည်း ပြောစမှတ်တွင် ရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်လေး တစ်ယောက်လို နုပျိုလန်းဆန်းနေတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကို ပရိသတ်ကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “အေးစက်တဲ့လေပြေတွေ တိုက်ခတ်ပြီးရင် နွေဦးရောက်လာမှာပါ…လှပတဲ့ပန်းလေးတွေ ထပ်ပွင့်လာမှာပါ… ငါ့နှလုံးသားဟာ တစ်ဖန်ပြန်နွေးထွေးပြီး ပန်းတွေ ဖူးပွင့် လာမှာပါ” ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလည်း ရေးသားထား ပါသေးတယ်။
နန်းစုကတော့ အဆိုတော်G Fatt နဲ့ စုံတွဲတွေ အဖြစ် လူသိ ရှင်ကြားဆက်ဆံရေး ကနေ တစ်ခန်းရပ် သွားတာလည်း မကြာသေးပါဘူး။ နန်းစုရဲ့ ကဗျာဆန်ဆန်စာသားတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကို သို့လောသို့လောထင်စေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းလှနေတဲ့အပျိုကြီး မမနန်းစု တစ်ယောက် နှလုံးသားတွေနွေးထွေးပြီး ပန်းတွေပွင့်စေဖို့ အကြောင်းတွေ များ ရှိနေပြီလားနော်….
နန္းစုရတီစိုး ကေတာ့ အသက္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ လွရက္လြန္းတဲ့ မင္းသမီး တစ္လက္ လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဖက္ရွင္က်က် ဝတ္စားတတ္သလို ႏုပ်ိဳေနတဲ့အလွတရားေတြ ေၾကာင့္လည္း ေျပာစမွတ္တြင္ ရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလး တစ္ေယာက္လို ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းေနတဲ့ အလွတရားေတြနဲ႔ အမိုက္စားဓာတ္ပုံေတြကို ပရိသတ္ကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ေအးစက္တဲ့ေလေျပေတြ တိုက္ခတ္ၿပီးရင္ ေႏြဦးေရာက္လာမွာပါ…လွပတဲ့ပန္းေလးေတြ ထပ္ပြင့္လာမွာပါ… ငါ့ႏွလုံးသားဟာ တစ္ဖန္ျပန္ေႏြးေထြးၿပီး ပန္းေတြ ဖူးပြင့္ လာမွာပါ” ဆိုတဲ့ စာသားေလး ကိုလည္း ေရးသားထား ပါေသးတယ္။
နန္းစုကေတာ့ အဆိုေတာ္G Fatt နဲ႔ စုံတြဲေတြ အျဖစ္ လူသိ ရွင္ၾကားဆက္ဆံေရး ကေန တစ္ခန္းရပ္ သြားတာလည္း မၾကာေသးပါဘူး။ နန္းစုရဲ႕ ကဗ်ာဆန္ဆန္စာသားေတြကေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို သို႔ေလာသို႔ေလာထင္ေစတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းလွေနတဲ့အပ်ိဳႀကီး မမနန္းစု တစ္ေယာက္ ႏွလုံးသားေတြေႏြးေထြးၿပီး ပန္းေတြပြင့္ေစဖို႔ အေၾကာင္းေတြ မ်ား ရွိေနၿပီလားေနာ္….
မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဘေးနားမှာ စာအတူတူ လာဖတ်ပေးရမလား ဆိုတဲ့ သွန်းဆက်
သွယ်လျ ကျစ်လျစ် တဲ့ ကိုယ်လုံးလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ တစ်မျိုးလေး လှသွေးကြွယ် နေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်